ဒီဇင်ဘာအလှပန်း – Clementine | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cover Faces » ဒီဇင်ဘာအလှပန်း – Clementine
ဒီဇင်ဘာအလှပန်း – Clementine
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ့ဂဇက် ဒီဇင်ဘာထုတ်တွင်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံ။ George Swar
အာ့ ကို ခောတ်စကားးးး ကိတ်တယ်လို့ ခေါ်တယ်
ရေဆေးငါးလို လှနိုင်ရှာသူရယ်….. ♫♪
ငေးးး လို့သာ မျှော်တယ်…
ပျော့ကာပဲ…. ပြောင်းး တယ်….
ဆိုရတာ အရသာကို ရှိ လို့
တူညား သားသမီး တွေများ လှချက်…
Myanmar Gazette စာတန်းကလည်း..ထိုးစရာ နေရာ ရှားလို့… ဂွစ်ဂွစ်..
ဖွေးဖွေးလောက်… ဒီကောင်မလေးကို မကြိုက်ဘူး ။
အဲ.. သူက.ကျနော့်ကို ကြိုက်တယ် ဆိုရင်တော့..စဉ်းစားပေးရမှာပေ့ါ…